Ny gorodona SPC dia mitarika ny lamaody fanamboarana trano, tsy ho variana amin'ny gorodona vita amin'ny hazo intsony - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ny gorodona SPC dia mitarika ny lamaody fanamboarana trano, tsy ho variana amin'ny gorodona vita amin'ny hazo intsony
Ahitsio: Denny　2020-01-20　Mobile
Ny kitay vita amin'ny kitay dia fitaovana vita amin'ny rihana voalohany ho an'ny olona, satria nalaina tamin'ny akora matevina avo lenta izy io, tsara tarehy ny hazon'ny hazo ary mafana ny loko. Flooring. Na izany aza, misy ny olana tsy azo alaina amin'ny gorodona vita amin'ny hazo!
1. Avo dia lafo ny vidiny, mila atsofoka ny hazo, ary simba tanteraka ny tontolo iainana.
2. Ny gorodona haingam-pandeha mora sy matevina dia misy zavatra manimba toy ny formaldehyde sy xylene na dia mahafeno ny fenitra aza izy ireo dia tsy midika hoe tsy misy izy ireo ary miteraka fahavoazana ny vatan'olombelona mandritra ny fotoana maharitra.
3. Rehefa mando na maina ny tontolo anatiny, dia mora ny aroso, ny mandoko, ny deforme, ny mamolavola ary ny mazo mihitsy.
4. Ny fepetra takiana amin'ny fananganana, ny tsingerina lava sy ny fanodinana tsy mahomby dia hiteraka olana maro.
Nandritra ny fotoana ela, ny olona dia mila ny fiononana amin'ny hazo vita amin'ny hazo, ary mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy miatrika ny olana eo ambony ihany izy ireo.
Avy amin'ny efi-trano malefaka mankany amin'ny efi-trano matevina, avy amin'ny fivoaran'ny tanimanga, biriky vato, simenitra, loko, hodi-jaza, takelaka gorodona, gorodona, gorodona ary tsiranoka seramika, ny olona dia mitombo bebe kokoa ny fepetra takian'ny tany amin'ny tontolo iainana, ary ny indostrian'ny haingon-trano. Izy io dia niova miaraka amin'ny fotoana ary nijanona hatramin'ny farany. Na dia efa nandritra ny taona maro aza ny gorodona vita amin'ny hazo, hita miharihary ny olana. Tao anatin'ireo 70 taona niorenan'ny gorodona eoropeanina sy Amerikana manolo-tena ho an'ny vanim-potoana lamaody sy lamaody vaovao, ny fitaovana maoderina mampiavaka ny haino aman-jery ara-teknolojia sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia ampiasaina betsaka amin'ny haingon-trano sy fanamiana ho an'ny daholobe. Anisany tamin'izy ireo dia nanomboka nanolo ny gorodona nentin-drazana miaraka amin'ny tombony betsaka kokoa toy ny fiarovana ny tontolo iainana, mateza ary ny fahamarinan-toerana ny gorodona SPC, dia tian'ny mpanjifa haingana.
Ny fitaovana tena mivaingana amin'ny gorodona SPC dia ny PVC (polyvinyl chloride resin) ary ny vovobony vato (kalsioma karbonina) .Ny poavaly dia PVC azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana sy tsy azo sotroina.Ny vovony vita amin'ny voajanahary dia misy 100% maimaim-poana amin'ny formaldehyde, metaly mavesatra ary karsogen, ary tsy misy volatile. , Fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana tsy azo tsindrina.
Ny gorodona SPC dia azo apetraka mivantana amin'ny tany lemaka toy ny gorodona vita amin'ny gorodona, gorodona taloha, gorodona gorodona, tile seramika, sns. Ny fangatahana super dia mamela azy ho haingana amin'ny fanavaozana ny trano sy ny fanavaozana ny trano taloha.
Ny SPC dia tsy vitan'ny hoe mihoatra lavitra noho ny gorodona vita amin'ny hazo, fa manana koa ny lamba manankarena vita amin'ny hazo toy ny gorodon-tsilo, ary ny sangan'asan'izy ireo dia tsara kokoa noho ny gorodon'ny laminate.
Amin'izao fotoana izao, maro ny tsenan'orinasa SPC, izay be korontana ary manana fahasamihafana lehibe amin'ny kalitao. Kingup SPC super gorodona dia nandalo ny fanamarinana iraisam-pirenena SGS fiarovana amin'ny tontolo iainana, nandà tsy hamerenana ireo fitaovana, handà ireo additives metaly mavesatra ary hanondrana vokatra any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 30. Ampiasaina betsaka amin'ny fanatsarana ny trano, fametrahana ampahibemaso ary toerana hafa izay mitaky fenitra fiarovana ny tontolo iainana.
Super mitafy matevina, tsy mivadika, tsy milentika, 10 taona mahery noho ny gorodona vita amin'ny hazo
Ny fampifandraisana lambam-baravarana amin'ny rantsam-baravarana SPC dia afaka maneho ny fahatsapana ny voamaina amin'ny fotoana mitovy, ary mora ny manadio tsy misy tohatra.
Fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny zero formaldehyde, loharanom-pialan-tsasatra tsara ary fanatsarana ny tontolo iainana
Porofom-panadiovana sy fanoherana ny bakteria, mahatonga ny rihana SPC mety kokoa ho an'ny villa, trano ary trano hafa manakaiky ny tany
Ny gorodona SPC dia miendrika fitaovana vita amin'ny haingon-trano modely maoderina, tsy ny firongatry ny haingo an-trano ihany, fa ampiasaina koa amin'ny karazam-pianarana, sekoly, trano famakiam-boky, hopitaly, birao, hotely, bara sy toerana hafa, ary eken'ny mpanjifa!
Ny gorodona SPC dia mitarika ny lamaody fanamboarana trano, tsy ho variana amin'ny gorodona vita amin'ny hazo intsony Ny atiny mifandraika